ဒီနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံး Cashmere လက်ဆောင်များ - ဖက်ရှင်
မင်္ဂလာဆောင်ဖက်ရှင် ကျန်းမာရေး ဘယ်လို အစားအသောက် ချက်ပြုတ်နည်းများ စီမံကိန်း & အကြံဥာဏ် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ရေရှည်တည်တံ့သောမီးဖိုချောင် လိင်ကိုချစ်တယ် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန်
ယခုရာသီအတွက်အကောင်းဆုံး Cashmere လက်ဆောင် (၁၅) ခု (နှင့်ငါတို့သာစကားပြောနေသည့်အင်္ကျီမဟုတ်ပါ ... )
နှစ်ပေါင်းများစွာသံသယရှိသောအားလပ်ရက်လက်ဆောင်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏မျှတသောဝေစုကိုကျွန်ုပ်တို့၏မြေအောက်ခန်းသို့ထုတ်ပေးပြီးနောက် (အန်တီရုသ် မနိုင် မှန်ကန်စွာရအောင်) ငါတို့သူငယ်ချင်းများနှင့်သူတို့အမှန်တကယ်လိုချင်သည့်လက်ဆောင်များကိုသာပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီနှစ်မှာငါတို့ဟာ Cashmere အမျိုးမျိုးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ငါတို့သည်စူပါအော့ဖ်, ရေရှည်ထည်မကြိုက်ဘူးသူတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဤနေရာတွင်အကောင်းဆုံးငွေသားလက်ဆောင် ၁၅ ယောက်ကိုဒေါ်လာ ၄၅ မှစတင်သည်။
သက်ဆိုင်သော: ၂၁ - စိတ်ဖိစီးမှုအလွန်များသောအိမ်ရှင်တိုင်းတန်ဖိုးထားမည့်လက်ဆောင်ပေးမယ်အကြံပေးချက်များ
1. Brodie Cashmere လည်စည်း - ငွေဆိုးရှပ်အင်္ကျီ
Temps ကျသည်နှင့်တပြိုင်နက်လည်ချောင်းဆေးဆိုးသည့်လမ်းကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုတင်မမြင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏တူမသည် ၁၀၀ ရာနှုန်းပြည့်ငွေသားဆွယ်တာအင်္ကျီကိုချစ်လိမ့်မည်ကိုသင်သိသည်။ ဒါဟာသူမ၏ဝါဂွမ်းချွေးထွက်များနှင့် DIY သို့ကျဆင်းလာ - ဆိုးဆေးများအားလုံးအရှက်ကွဲစေလိမ့်မယ်။
၀ ယ်ပါ ($ 340)
၂။ Charter Club Crewneck Cashmere ဆွယ်တာအင်္ကျီ
PureWow စာဖတ်သူများသည်ဤဆွယ်တာအင်္ကျီကိုအလွန်ချစ်မြတ်နိုးပြီး၎င်းသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင် ၀ ယ်ယူမှုအများဆုံးပစ္စည်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂန္ထဝင် silhouette၊ အရည်အသွေးမြင့်မားသောပစ္စည်းများနှင့်အထင်ကြီးလောက်သောအရောင်အကွာအဝေးအကြားကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်မြင်နိုင်သည်။ စျေးနှုန်းမသက်သာဘူးလား ချွေးထွက်ခြင်းမရှိ၊ ဤစတိုင်ကိုဒေါ်လာ ၃၆ ဖြင့်သာရောင်းရပြီးနိုးနိုးကြားကြားရှိပါ။
ဝယ်လိုက်ပါ ($ 139; ဒေါ်လာ ၁၁၁)
၃။ Saks Fifth Avenue Collection သည် Tech Cashmere လက်အိတ်များဖြစ်သည်
သတင်းကောင်း။ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ၊ နွေးထွေးသောလက်အိတ်များနှင့်ရွေးချယ်ရမည့်နေ့ရက်များ တကယ်တော့အိုင်ဖုန်းနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့စျေးပေါသူတွေ ကျော်ပါပြီ Saks Fifth Avenue Collection မှဤစုံတွဲသည်အကောင်းဆုံးသောကမ္ဘာနှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းစပ်ထားသည် နှင့် သင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်ကိုပိတ်ထားခြင်းမရှိဘဲစာရိုက်နိုင်စွမ်း။
ဝယ်ပါ ($ 98)
၄။ Cashmere Reversible Throwet blank ပြည်နယ်
၎င်း၏နောက်ပြန်လှည့်ဒီဇိုင်းကြောင့်သင့်အနေနှင့်မည်သည့်အရောင်သည်သင်၏အပြင်အဆင်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးပေါ် မူတည်၍ ၅.၁ ပေစောင်ဖြင့် ၄.၁ ပေကိုလှန်ချနိုင်သည်။ ၎င်းသည်စျေးနှုန်းအတွက်မွန်ဂိုလီးယားငွေသားကိုင်ဆောင်သည့်စောင်နှစ်ရာကိုဝယ်ယူခြင်းနှင့်တူသည်။ ရှေ့ဆက်သွားပါ၊ ငါတို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူး။
အမေဇုံမှာ $ 255
5. Charter Club Plus အရွယ်အစား V-Neck Cashmere ဆွယ်တာအင်္ကျီ
ကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်သူများအကြိုက်ဆုံးတွယ်ကပ်ထားသော V-neck ဗားရှင်းသည် 0x မှ 3X အရွယ်အစား ရှိ၍ ပြန်လည်သုံးသပ်သူတစ် ဦး ၏အဆိုအရ၎င်းသည်စုံလင်သည်။ မင်းရဲ့ဝမ်းကွဲတစ်ယောက်ကသူမသီတင်းပတ်တိုင်းနေ့တိုင်း ၀ တ်ဆင်ဖို့အထူးဒီဇိုင်းဆွဲထားသလိုခံစားရတဲ့ဆွယ်တာအင်္ကျီတစ်ကောင်ဘယ်လိုရှာတွေ့ခဲ့တာလဲလို့တွေးမိလိမ့်မယ်။
၀ ယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၁၄၉)
6. မော်ဂန်လိန်း Bella Cashmere အဝတ်
ကျွန်တော့်အမေကစိတ်ရှုပ်ထွေးတဲ့ရှပ်အင်္ကျီလိုကျွန်တော့်ရဲ့ညဥ့်နက်သန်းခေါင်မှာစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့လိုင်းဖုန်းခေါ်တာကိုဖြေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခါးပတ်၊ ကီမိုနိုစတိုင်သည်သူမလွန်ခဲ့သောခရစ်စမတ်စ်အနည်းငယ်ကိုသင် ၀ ယ်ခဲ့သောပင်ဂွင်းပုံနှိပ်ထားသောဝတ်ရုံမှအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုတွင်သူမ၌သင်၏နေ့စဉ် FaceTime ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများအတွက်အသစ်သောအရာတစ်ခုရှိသည်။
၀ ယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၅၇၈)
7. ပြည်နယ် Cashmere Cable ကို Knit Cuffed Beanie
လျှို့ဝှက် Santa အတွက် $ 50 ကန့်သတ်ထားပါသလား။ သငျသညျကံကောင်းပါစေ, ဒီစင်ကြယ်သော cashmere beanie ရုံ $ 45 ကုန်ကျသည်။ သို့သော်ကေဘယ်ကြိုးစည်းပုံစံသည်၎င်းကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ခံစားခြင်းက၎င်းထက်စျေးကြီးသည်။ ဒါဟာပျော့နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပါပဲ။ ပြန်လည်အစားထိုးသူတစ် ဦး ကရေးသားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အစားထိုးသည့်သိုးမွှေးထုပ်ထက် ပို၍ ပါး။ ပူသည်။
အမေဇုံမှာ $ 45
၈.၃၆ Cashmere Lizzie Crewneck ဆွယ်တာအင်္ကျီ
သင်၏ MIL သည်စိတ်ကျေနပ်လောက်အောင်ခက်ခဲသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သူမကိုဝိုင်ပုလင်းတစ်ပုလင်းယူ။ တစ်နေ့မခေါ်နိုင်ပါ။ သူမသည်နာမည်ဆိုးဖြင့်ဇီဇာကြောင်နေလျှင်ပင်သူမပျော့ပျောင်းခြင်း၊ နှစ်သိမ့်ခြင်းလုံးဝမရှိသောဤရိုးရှင်းသော beige crewneck ကိုကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်။ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းသောငွေသားနှင့်ချော့မော့သောဖြတ်တောက်ခြင်းကသူမကိုလုံးဝရောင်းလိမ့်မည် သူမသည်သင်အဓိကရောင်းချမှုတွင်သူသွင်းခဲ့သည်ကိုသိရန်ဘယ်တော့မှ ...
ဝယ်လိုက်ပါ ($ 345; ဒေါ်လာ ၂၄၁)
၉ ။ Sofia Cashmere အိပ်မောကျသော Aero ခရီးသွားလုပ်ငန်း
ဤညှိနှိုင်းထားသောစောင်၊ မျက်လုံးမျက်နှာဖုံးနှင့်သိုလှောင်မှုအိတ်အစုံသည်ငွေသားကိုင်သူမှ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်သူမစတိုင်လ်သွားနိုင်သည်။ သေချာတာပေါ့၊ မင်းရဲ့စွန့်စားခန်းကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့အစ်မဟာသူမနောက်ဥရောပခရီးစဉ်ကိုခဏတာစီစဉ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့်သူဟာဒီစောင်အောက်မှာလမ်းခရီးတစ်ဝိုက်အိပ်မောကျနေဖို့လုံးဝအဆင်ပြေပါတယ်။
၀ ယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၃၉၅)
နောက်ထပ် PureWow စာဖတ်သူအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့်ဤကြီးမားသောပဝါကိုထူးချွန်သောအရည်အသွေး၊ စွယ်စုံဖြင့်ဖော်ပြပြီးစိတ်အားထက်သန်သောပြန်လည်သုံးသပ်သူများ၏စကားလုံးများအတွက်အလွန်လှပသည်။ ၎င်းသည်ခရီးသွားစောင်ကဲ့သို့အသုံးပြုရန်အလုံအလောက်ရှိသည်။ ၎င်းသည်မကြာခဏရောင်းဝယ်တတ်လေ့ရှိသဖြင့်သင်အနည်းငယ်ရောင်း။ ၎င်းတို့ကိုသင်၏စာအုပ်ကလပ်၏အကောင်းဆုံးလက်သို့အပ်နိုင်သည်။
၀ ယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၁၇၉)
11. NakedCashmere သတ်မှတ်မည်
တစ် ဦး အပေါ်ချော်ထက်ပိုပျူငှါနွေးထွေးသောတစ်ခုတည်းသောအရာ Cashmere crewneck ဒါမှမဟုတ်တချို့ Cashmere joggers ? နှစ် ဦး စလုံးတပြိုင်နက်ဝတ်ဆင်, ဒါကြောင့်သူတို့က ဦး ခေါင်း -to-toe နူးညံ့သိမ်မွေ့အတွက် draped ပါတယ်။ ဒီအမြှေးပါးအစုံဟာ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းသောငွေရှင်းကောင်တာကနေသိုးမွှေးထိုးထားတဲ့သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့အကျီင်္ရှိပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းကသူမသေတ္တာကိုဖွင့်လှစ်တခါကမရပ်မနားဝတ်ထားလိမ့်မယ်။
ဆွယ်တာကို ၀ ယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၂၉၅)
Jogger ကိုဝယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၂၉၅)
12. Everlane The Cashmere Henley
၀ တ်စုံ ၀ တ်စုံ ၀ တ်စုံ ၀ တ်စုံ ၀ တ်စုံကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖက်ရှင်ချစ်သူများအတွက်စျေး ၀ ယ်ခြင်း။ သူ့ကိုဒီ cashmere henley လက်ဆောင်။ သူမသည်လှပသောခလုတ်များနှင့်တောက်ပသောအင်္ကျီလက်များကိုကျော်ပြီးပျံတက်သွားလိမ့်မည်။ သူမနွေ ဦး ပေါက်သည်အထိသူမနေ့စဉ်နေ့တိုင်း ၀ တ်ဆင်ပါကမအံ့သြသင့်ပါ။
ဝယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၁၂၀)
13. NakedCashmere Cable ခွေးဆွယ်တာ
ဒီနှစ်ထဲမှာ Sadie ဟာအလွန်ကောင်းသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ။ ဒါကြောင့်သူမကို Cashmere cable knit sweater ဖြင့်ဆုချပါ။ သငျသညျသူမ၏အသစ်သောအဝတ်အစားကိုချွတ်ပြသရန်အတွက်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုပတ်ပတ်လည်လမ်းလျှောက်ဘို့သူ့ကိုယူရန်စီစဉ်ထားလျှင်လွယ်ကူ leash access ကိုများအတွက်ထိပ်မှာအလျားလိုက်အပေါက်ရှိပါတယ်။
ဝယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၈၅)
14. Rosie Sugden ဂန္ထဝင် Cashmere Ear Warmer
နားကြပ်တစ်ချောင်းထက် ပို၍ ဝေးသည်ထက် ပို၍ လွယ်ကူမြန်ဆန်သောဤငွေသားကိုင်ကြိုးတပ်ဆင်မှုသည်လည်ပတ်အလုပ်လုပ်သည်နှင့်တူညီသည်။ သူမ၏စတော့ရှယ်ယာထဲမှာ Stuff နှင့်သူမလုံးဝအံ့သြသွားပါလိမ့်မယ်။
ဝယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၉၉)
15. Naadam The Essential $ 75 Cashmere ဆွယ်တာအင်္ကျီ
ခင်ဗျားရဲ့စေ့စပ်ထားသူကဒီဆွယ်တာကဘယ်လောက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာကိုမြင်တော့သူကကောလိပ်တက်နေတဲ့ကောလိပ်ကိုခေါင်းတထောင်းမော့ဘဲစွန့်လွှတ်လိုက်ရုံပဲ။ ကြယ်ငါးပွင့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသုံးသပ်ချက် ၃၀၀ ကျော်နှင့်အတူ ၇၅ ဒေါ်လာသောဗီရိုချုပ်သည်တစ်ပြားလျှင်ကျိုးနပ်သည်။
ဝယ်ပါ (ဒေါ်လာ ၇၅)
သက်ဆိုင်သော: သင်ဝယ်ယူသင့်သော One Fall Wardrobe ၏အဓိက (နေရာတိုင်းတွင်ရောင်းချနေသောကြောင့်)
Categories ကြံ့ခိုင်ရေး ထုတ်ကုန်များ Celeb ကြည့်ပါ